Momba anay - MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTD
MOLONG TATTOO SUPPLY CO., LTDnatsangana tamin'ny taona 2009, mpanamboatra fitaovana fanaovana tatoazy matihanina any Shina, manolotra fitaovana sy famatsiana tatoazy matihanina feno. Fanjaitra amin'ny tombokavatsa, Cartridge an'ny tatoazy, Masinina fanaovana tombokavatsa, kitapo tatoazy, Tain-tsoroka, fantsona azo alefa, toro-hevitra azo ampiasaina, famatsiana herinaratra, kojakoja ara-pahasalamana, kojakoja studio an'ny tatoazy, kojakoja fanosehana, kojakoja makiazy sns.
Ny tanjonay voalohany dia ny manolotra ny mpanjifany fandefasana haingana, serivisy namana sy matihanina ary vokatra avo lenta, hananganana fifandraisana maharitra miaraka amin'ny mpanjifantsika mifototra amin'ny kalitaon'ny vokarinay amin'ny vidin'ny orinasa mifaninana.
Manao serivisy tonga lafatra sy vokatra avo lenta izahay. Avy amin'ireo vao manomboka ny tatoazy ka hatrany amin'ireo mpanakanto matihanina dia misarika ny sain'izy ireo ny vokatray. Tongasoa izay hevitra sy sosokevitra avy amin'ny mpanjifa sarobidy aminay. Hanatsara hatrany ny vokatra sy serivisinay izahay.
Manompo Etazonia, Kanada, Eropa, Azia, Amerika atsimo, Aostralia, Nouvelle Zélande, firenena Afovoany Atsinanana, Afrika atsimo sy toeran-kafa rehetra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena isika.
Mahomby sy sariaka ny ekipanay, azafady mifandraisa aminay maimaimpoana raha manana fanontaniana ianao.
Tongasoa eto MOLONG TATTOO SUPPLY, ny orinasanay no mpamatsy fitaovam-panafody any Shina, manampahaizana manokana amin'ny karazan-doko isan-karazany.
Manana traikefa an-taonany maro izahay amin'ny famokarana fanjaitra tatoazy, fanjaitra cartridge an'ny tatoazy, milina fanaovana tombokavatsa, kitapo, toro-hevitra, famatsiana herinaratra, famindrana tongotra, tadim-peo sns.
Manolotra fitaovana avo lenta avo lenta izahay amin'ny vidiny tsara indrindra. Omeo ny mpanjifa eran'izao tontolo izao ny safidy tsara indrindra hankafizany vokatra mahafinaritra.
Ny orinasanay dia miorina ao amin'ny gorodona # 2 Building # 9 Zongtang District 1 Yiwu Zhejiang China 322000
Ny marika manokana anay: MO, LBB, WhatsBravo, Flame, HRK, Needle Tattoo an'ny rivodoza.
Tongasoa eto raha hiresaka momba ny fahatongavana ho varotra mpivarotra ny vokatra marika hivarotra irery ao amin'ny firenena na faritra misy anao raha feno ny fepetra. Azontsika atao ihany koa ny manao serivisy OEM ho an'ny vokatra marika an'ny mpanjifanay.
Aza misalasala mifandray aminay raha mila fanazavana fanampiny raha liana amin'ny vokatray ianao. Miandry ny fanontanianao, hananganana ny fifandraisanay amin'ny asa maharitra, ataovy ambony sy ambony ny orinasantsika.